Baarista feyruuska koroonaha iyo karantiilaka iskaa ah - Finentry
Baarista feyruuska koroonaha iyo karantiilaka iskaa ah
Baarista feyruuska koroonaha ujeeddadiisu waa in laga hortago baahista oo lagu hago haddii loo baahdo daryeel. Baaristu weey habboon tahay, maxaa yeelay waxaad kaalmadeeda ku soo gaabin kartaa karanteelka iskaa ah.
Karantiilka iskaa ah
Karantiilka iskaa ah waxaa looga hortagayaa baahista feyruuska koroonaha oo lagu hubinayaa badqabka guud. Tanu waa mid muhiim ah marka aad imaaneeyso Finland ee aad ka imaaddo waddamada feyruuska koroonaha ku badan yahay.
Karantiilka iskaa ah waxaa loola jeedaa, in aad iska ilaalisid u dhawaanshaha dadka sida reerkaaga ama qolyaha kula safraya ama dadyowga kale oo mar walba aad iska joogtid guriga ama goobta deegaankaaga. Goorta aad adeecdid karantiilka iskaa ah 14 maalmood, waxaad iska ilaalisay faafidda kale. Baarista feyruuska koroonaha maxsuulka ka soo baxa waxuu hoos u dhigayaa karantiillka iskaa ah dhererkiisa.
In dheeraad ah ka akhri karantiilka iskaa ah halkaan.